La kulan nooca cusub ee tifaftiraha sawirka GIMP 2.8.20 | Abuurista khadka tooska ah
Dhammaan wixii ku saabsan GIMP 2.8.20
Dhawr sano ayaa laga joogaa markii laanta la daabacay 2.6 ee GIM daabacadaha muuqaalka dhijitaalka ah iyo tan iyo markaas waxay sii dhaafayeen waxoogaa cusbooneysiin ah illaa ay ka gaarayaan laanta 2.8 ee GIM, iyadoo aan kuu soo wadno warar fara badan oo aan uga hadlayno si farsamo iyo macno guud leh oo ku saabsan fahamkaaga fudud.
1 Iskuxirkeeda daaqada kaliya ayaa had iyo jeer soo jiidasho leh
2 Waxaad sidoo kale u habeyn kartaa daaqadaha iyo wadahadalada dhadhankaaga shakhsi ahaaneed
3 Hawlgallo xisaabeed fudud
4 GIMP 2.8.20 wuxuu u yahay tartan wanaagsan Photoshop
Iskuxirkeeda daaqada kaliya ayaa had iyo jeer soo jiidasho leh
Interface Tani had iyo jeer waa lagu kala sooci jiray kuwa kale sida Photoshop iyadoo la soo bandhigayo daaqadaha madaxa banaan, taas oo dad badani jecelyihiin iyo kuwo kale oo aan la qabsan.
Sida caadiga waxaad fursad u leedahay inaad ku shaqeyso daaqad keliya Oo waxaad ku sameysaa tan iyada oo loo marayo qaabeyn fudud oo ku timaadda menu marka aad gujineyso daaqadaha, sidaas darteed adiga ayay kugu xiran tahay inaad ku shaqeyso daaqad keliya iyo haddii kale. Hadaad lashaqeyso kormeerayaal badan oo GIMP ah waxaad kaheli doontaa faa iido weyn kuwa kale ee tartamaya.
Waxaad sidoo kale u habeyn kartaa daaqadaha iyo wadahadalada dhadhankaaga shakhsi ahaaneed
Markaad abaabulayso daaqadaha iyo wadahadalada, nuuca GIMP wuxuu ku siin doonaa dabacsanaan badan tan iyo markii aad tagi karto sameynta daaqadaha si aad uhesho wada hadalo kaladuwan waxayna umuuqanayaan tiir.
Waxaad sidoo kale yeelan kartaa sawirro kala duwan isla shaashadda, si looga takhaluso baararka hagaajinta xanaaqa leh. Sidoo kale qalabkan la cusbooneysiiyay wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hagaajiso socodkaaga shaqada xitaa sifiican markaad isbarbardhigto noocyadii hore, maadaama ikhtiyaarka ah inaad dhoofiso sawirrada had iyo jeer muhiim ka tahay alaabada GIMP.
Waxa kale oo jira furayaal toobiye oo ah kuu fududeeyo hagaajinta iyo hawlaha kale ee aad u baahan tahay inaad gacanta ku hayso, maadaama aad had iyo jeer yeelan doonto toos u habeynta qoraalka dusha sare ee shiraaca ama sawirka aad ku shaqaysanayso. Dhamaan astaamahan qoraalka waa kuwo sifiican u muuqda waxaadna ku xulatay font family, cabirka, qaababka, qaababka iyo kontaroolada wareejinta, midabka midabka sidoo kale waa mid soo jiidasho leh.
Hawlgallo xisaabeed fudud
Ku hagaajinta xisaabta markaa waxaad go'aansan kartaa waxyaabaha muhiimka ah sida ballaca iyo dhererka iyo pixels si otomaatig ah.
Sidoo kale markay tahay cilladaha cilladaha waxaa jira cusbooneysiin cusub iyo faylal kale oo guuleysan doona tayada sawirka sare, yareynta culeyskeeda iyo bogag kale oo kuu ogolaanaya inaad sifiican u tafatirto.
Waa inaan dhahno taasi waa sidoo kale la jaan qaadaya Linux iyo Windows taas oo u tarjumeysa waxqabad kordhay iyo dabcan Mac OS, laakiin xulashada daaqadaha badan waa hubaal wax badan oo isticmaaleyaal ah ay ugu mahadcelinayaan.
Waxaas oo dhan waa hordhac wanaagsan oo ku saabsan 3.0-ka cusub maxaa balan qaadaya inuu ahaado tifaftire ka awood badan iyo had iyo jeer bilaash, inkasta oo sii deyntiisa mustaqbalka wali aan la garanayn. Si kastaba ha noqotee, horay ayaan u qiimeyn karnaa sixitaan iyo qaabab cusub taas oo inaga dhigeysa in ka badan qanacsanaanta iyo in kaliya ay kaamil noqonayaan bilaabida sidaas oo ay wada sugayaan.
Nidaamka shaqo ee toosan waa wax aan rajeyneyno inaad ku horumarin karto daabacadaha mustaqbalka, sidoo kale daaweynta lakabyo kala duwan iyo horumarin cusub oo leh mowduucyada isdhexgalka.
GIMP 2.8.20 wuxuu u yahay tartan wanaagsan Photoshop
Inta udhaxeysa labadan kolossi waxay kor u qaadayaan dagaal kulul si ay u noqdaan kan ugu fiican uguna caansan, tan iyo labadan arrimood ee muhiimka ah si fiican ayaa loo kala soocay, Maaddaama dadweynaha guud ay hagaan kuwa ugu caansan halka xirfadleyda naqshadeynta ay raadinayaan cibaaro loogu talagalay daabacaadda shaqadooda ugu dambeysa.
Shaki la'aan, tartanku wuxuu keenayaa horumar badan oo ku saabsan aagaggan iyo dhowrkii biloodba mar waxaan markhaati ka nahay horumarin cusub oo dhanka edbinta qaabeynta ah iyada oo loo marayo barnaamijyada bilaashka ah. Marka laga hadlayo dib-u-hagaajinta sawirrada, GIMP iyo Photoshop shaki la'aan waxay hoggaaminayaan hoggaanka, kii hore gebi ahaanba waa bilaash sidaa darteedna dadka waa loo heli karaa.
Ka faaideyso Faa'iidooyinka GIMP 2.8.20 oo ka dhig shaqadaada mid tayo sare leh oo ku soo dejiso bilaash tan isku xirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Gimp » Dhammaan wixii ku saabsan GIMP 2.8.20
Isbeddellada Naqshadeynta Muhiimka ah ee Bisha Maarso
Falcelinta Facebook iyo astaanta caanka ah ee wadnaha